ओलीलाई लन्चमा बोलाएर राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्: प्रचण्डजीलाई अध्यक्ष दिनुहोस, नत्र हुन्न ! — Sanchar Kendra
ओलीलाई लन्चमा बोलाएर राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्: प्रचण्डजीलाई अध्यक्ष दिनुहोस, नत्र हुन्न !
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रचण्डलाई एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष दिन केपी ओलीसँग आग्रह गरेकी छिन । आइतबार एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई लन्च मिटिंङमा बाेलाएर राष्ट्रपति भण्डारीले यस्ताे अाग्रह गरेकी हुन् । प्रचण्डले नै यो कुराको आफै खुलासा गरेका छन् ।
आइतबार माओवादी केन्द्रनिकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय नेता पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न पुगे । एमाले–माओवादीबीचको एकताको कोर्ष कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न लिएर प्रचण्डनिवास पुगेका विद्यार्थी नेताले फर्कदा त्यसको राम्रै जवाफ पाए । र, एकता हुन्छ–हुन्न अर्को प्रश्न लिएर फर्किए ।
विद्यार्थी नेताहरु समक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको ६ घन्टे लन्च मिटिङको प्रशंग निकालेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई संकेत गर्दै भनेको प्रशंग निकाल्दै प्रचण्डले विद्यार्थी नेतासँग भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूले ओलीजीलाई तपाईं प्रधानमन्त्री बन्नुस्, प्रचण्डजीलाई पार्टी अध्यक्ष दिनुस् र मिलेर जानुस् भन्नुभयो ।’ भेटमा सहभागी एक विद्यार्थी नेताका अनुसार दुवै नेताले फागुनमा बैठक बसेर सहमति खोज्ने आश्वासन राष्ट्रपतिलाई दिएको प्रचण्डले जानकारी गराए ।
प्रचण्डलाई अध्यक्ष नदिए एकता धरापमा पर्ने भण्डारीको बुझाई रहेको स्रोतको भनाई छ । त्यसैले पनि भण्डारीले ओलीलाई पटकपटक बोलाएर छलफल गरिरहेकी छिन ।
ओली नयाँ सरकार गठनका लागि तयारीमा जुटेका छन् भने प्रचण्ड पहिले पार्टी एकता गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर चैत्रयता कुनैपनि हालतमा २ पार्टी एक बन्नसक्ने परिस्थिति नै देखिदैन ।
विद्यार्थी नेता समक्ष प्रचण्डले एमाले–माओवादी एकता भाँड्न बाह्य शक्ति लागिपरेको बताएका थिए । एकताको कोर्ष अघि बढाउनु पर्यो, होइन भने पार्टीलाई कसरी सुरक्षित पार्न सकिन्छ नेतृत्वले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्यो भन्ने विद्यार्थी नेताको सुझाव सुनेपछि प्रचण्डले ओलीमार्फत बाह्य शक्तिले पार्टी एकता हुन नदिन ठूलै चलखेल गरेको ब्रिफिङ गरेका थिए ।
भेटमा क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ र उपाध्यक्षहरु सुरेन्द्र बस्नेत, तिलकराज भण्डारी, विजय गौतम र पञ्चा सिंहको सहभागीता थियो ।